မိုဟာမက် အူမာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖိုင်:Mullah Omar (page6crop).jpg
မိုဟာမက် အူမာ (Dari: محمد عمر‎‎ ၊ ၁၉၆၀ - ၂၀၁၃ ဧပြီ ၂၃) သည် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး မူလာ ခေါ် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက် ဖြစ်သည်။ တာလီဘန်အဖွဲ့ကို ခေါင်းဆောင်သော မူဟာဂျစ် စစ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကာ ၁၉၉၆ ခုတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံကို ထူထောင်သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှုကို လုပ်ဆောင်သည့် အိုစမာဘင်လာဒင်နှင့် အခြား အယ်ကိုင်ဒါလက်နက်ကိုင်တို့ကို လက်ထောက်ချသူအဖြစ် သတ်မှတ်ကာအမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အလိုရှိစာရင်းတွင် ပါဝင်လာသည်။  အမေရိကန်တို့ အာဖဂန်နစ္စတန်သို့ ဝင်လာသည်နောက် ကန္ဒမာရှိနေအိမ်မှ တိတ်တဆိတ်ပြေးကာ တာလီဘန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အား ညွှန်ကြားပြီး နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို၎င်း၊ အမေရိကန်နောက်ခံ အာဖဂန်နစ္စတန်အစိုးရကို၎င်း ပြောက်ကျားတိုက်ခိုက်သည်။ သတင်းရင်းမြစ်အချို့က မကွယ်လွန်မီအထိ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ကရာချီမြို့တွင် နေထိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် သတင်းထောက် ဘတ္တီဒမ်ကမူ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ဇာဘူမြို့ရှိ အမေရိကန်အခြေစိုက်စခန်းအနီးတွင် ရုပ်ဖျက်နေထိုင်သည် ဆို၏။ 
အူမာသည် ၂၀၁၃ ခု၊ ဧပြီလ ၂၃ ရက်တွင် အဆုတ်ရောဂါဖြင့် လွန်သည်။  သေဆုံးကြောင်းကို တာလီဘန်အဖွဲ့က ၂ နှစ်ကြာ သတင်းမဖော်ဘဲ နေသည်။ နောက် အာဖဂန်နစ္စတန်၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ ဖော်ထုတ်နိုင်မှသာ လူထုက သိရသည်။ 
↑ "Taliban founder lived near US military base in Afghanistan: report". 11 March 2019 – via www.dw.com/en/.
↑ "Afghan intel agency: Taliban leader died two years ago". USA Today.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မိုဟာမက်_အူမာ&oldid=689320" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။